DAAWO: Amarro uu soo rogay Axmed Madoobe oo ka dhan ah Seerar & Xidig oo maanta ka dhaqan-galaya Kismaayo.
September 20, 2019 NEWS 1
KISMAAYO(P-TIMES) – Amarro shalay ka soo baxay Golaha Wasiiradda ee Jubbaland ayaa maanta ka hirgalaya magaalada Kismaayo, kuwaas oo lagu mamnuucay in wax kulamo siyaasadeed iyo isku imaatin aysan ogeyn laamaha Ammaanka iyo maamulka aysan ka dhici karin magaaladaas, waxaana maanta ciidamo badan la dul-dhigay qaar kamid ah goobaha mucaaradka ay degan yihiin.
Ciidamo fara badan ayaa lasoo dhigay jidadka muhiimka ah ee magaalada Kismaayo, kuwaas baaraya gaadiidka iyo dadweynaha, waxaana muuqata in ay ciidamadu fulinayaan amaradii kasoo baxay golaha wasiiradda.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa horey u sheegay in aysan marnaba raali ka noqon doonin in Madaxweynayaal, cid kale iyo dawladdo toonay ay kahirgalaan magaalada Kismaayo, wuxuuna sheegay in aysan gorgortan ka gali doonin ammaanka magaalada.
Kulankii golaha wasiiradda ee shalay ayay ku cadeysay Jubbaland in aysan aqoonsaneyn cidna ee ay tahay in lajoojiyo kulamada siyaasadeed, loona hogaansamo sharciga iyo kala dambeynta oo ay sheegeen in ay ciidamaddu fushan doonaan amaradooda.
20-ka maanta ah ayaa la go`aamiyey in wixii ka dambeeya aan cidna kulamo siyaasadeed ku qabsan karin gudaha magaalada Kismaayo, waxaana taasi ay ka dhigan tahay fariin siyaasadeed oo si cad loogu sheegayo kooxaha mucaaradka in aysan qabsan karin wax kulamo ah.
Xildhibaan Cabdishariid Maxamed Xidig & Cabdinaasir Seerar oo horey uga mid ahaa asaasayaashii Jubbaland ayaa kusugan gudaha magaalada Kismaayo, waxayna labaduba sheegeen in loo doortay Madaxweynaha Jubbaland, ayna doonayaan in ay caleema-saar ku qabsadaan gudaha magaaladaas.
Caadaqaatayaal oodhan waa la xiraa, waliba hal mar baa loo ogolaadaa in ay cunta cunaan 24 tii saac, qas looma baahna, raagaasi yey Xamar tegin.